संसार हल्लाउने लेनिन को हुन् ? | Ratopati
सन्दर्भ : लेनिन जयन्ती
personध्रुवराज कार्की exploreकाठमाडौं access_timeबैशाख ९, २०७६ chat_bubble_outline3
कसरी हेलिए क्रान्तिको मार्गमा?
लेनिन आफ्नो दाजु अलेक्जेन्डरको व्यक्तित्वबाट निकै प्रभावित थिए । लेनिनका दाजु अलेक्जेन्डर पिटस्वर्ग विश्वविद्यालयको बिद्यार्थी छँदा जारशाहीबिरुद्ध क्रान्तिकारी संघर्षमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुन्थे । आफ्ना जेठा दाजुबाट नै लेनिनले मार्क्सवादी साहित्यको प्रारम्भिक ज्ञान हासिल गरेका थिए ।
लेनिन आफ्ना क्रान्तिकारी लेखहरु, किताब र पत्रिकाहरुका हरफहरुको बीचमा दूधले लेख्थे । यसरी लेखिएका अक्षरहरु देखिँदैनथे, तर कागज तताएपछि यी अक्षरहरु पढ्न सकिन्थ्यो । जेलमा रहँदै लेनिनले आफ्नो प्रख्यात कृति ‘रुसमा पूँजीवादको विकास’ लेख्न सुरु गरे ।
उनले सर्वहारावर्गको नेतृत्वको पार्टीबिना न समाजवादी क्रान्तिले विजय प्राप्त गर्न सक्छ न त साम्यवादी समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मार्क्सवादी शिक्षालाई विकसित तुल्याए । रुसका बहुसंख्यक पार्टी समितिहरुले बोल्सेभिकहरुलाई साथ दिए । बहुसंख्यक पेशागत क्रान्तिकारीहरु र पार्टीका मजदुर सदस्यहरुले लेनिनको विचारलाई समर्थन गरे ।
लेनिनले बडो ध्यानपूर्वक गोर्कीको बाल्यावस्था र जवानीबारे, उनको घुमन्ते जीवनबारेका वर्णनहरु सुने र यी सब कुरामा लेख्न अनुरोध गरे । गोर्कीले आफ्ना कृतिहरु मेरो बाल्यावस्था, मानिसहरुको बीचमा र मेरो विशवविद्यालयमा यी कुराहरु उल्लेख गरेका छन् ।
१९१७, अप्रिल ३ को राती दशक लामो आफ्नो निर्वासित जीवन त्याग्दै लेनिन रुसको पेट्रोगाड सहर फर्के । उनको स्वागत गर्न लालझण्डा बोकेका हजारौं श्रमिकहरु फिनल्याण्ड स्टेसनमा भेला भए । क्रान्तिकारी फौज र नौसेनाले ‘गार्ड अफ अनर’को व्यवस्था गरेको थियो ।
सन् १९१८ अगस्ट ३० मा एसेर पार्टीकी सदस्य काप्लानले लेनिनमाथि गोली चलाइन् र लेनिन सख्त घाइते भए । रातदिन डाक्टरको उपचार र उहाँको आफ्नै धैर्यताको कारणले गर्दा लेनिनको स्वास्थ्य बिस्तारै सुध्रिँदै गयो । सम्पूर्ण सोभियत जनताले गरेको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनाले पनि लेनिनलाई आफ्नो स्वास्थ्य सुधार गर्न थप बल प्रदान गर्यो ।
कडा परिश्रमको कारणले सन् १९१८ मा गोली लागेर भएको घाउ बल्झिँदा लेनिनको स्वास्थ्य निकै बिग्रिन गयो । सन् १९२१ को जाडोदेखि डाक्टरहरुको अनुरोधमा उनी अक्सर आराम र उपचारको लागि आफ्नो काम रोक्न बाध्य भए । सन् १९२४ मा उनको स्वास्थ्य झन् बिग्रियो । तर, अस्वस्थ भए पनि लेनिनले हरेक दिन सरकारी कामकाजको रेखदेख गर्न छाडेनन् ।
April 23, 2019, 7:14 a.m. Om prakash rana
नेता होस त यस्तो होस जो निरन्तर देश र जनतको लागि लदि रहोस
April 23, 2019, 12:29 a.m. Devraj Bhatta
April 22, 2019, 8:49 p.m. amrit dulal